Ọdụ ụgbọ elu Liberia nke Costa Rica na-ekwupụta ule COVID
Home » Akụkọ banyere ọdụ ụgbọ elu » Ọdụ ụgbọ elu Liberia nke Costa Rica na-ekwupụta ule COVID
Ọdụ ụgbọ elu Liberia nke Costa Rica na-ekwupụta ule COVID n'efu
Daniel Oduber Quiros Internationa Airport na-enye ndị njem nnwale nnwale antigen n'efu
Ga n'ihu na-aga n'ihu nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 na-eme ka nlọghachi nke ndị America na njem
Ebumnuche njem mba ụwa ga-agbanwe na mbido afọ 2020 tupu oge eruo maka njem mba ụwa
Enwere ike ị nweta oge akara aka elekere 72 awa n'ịntanetị tupu ụgbọ elu gị na ije ije gị
Costa Rica si Daniel Oduber Quiros International (Liberia - LIR) Ọdụ ụgbọ elu ekwuputala mmekorita ya na ulo nyocha nke ulo oru nke nwere ihe kariri iri isii nke ihe omumu banyere ahu ike, iji nye ndi njem nlere antigen n'ọdụ ụgbọ elu dika otu elekere.
A ga-enwe oge ọhụhụ maka oge awa 72 tupu ụgbọ elu gị ma ọ bụ ije ije gị anabata. N'ime izu ndị na-abịanụ, Juan Santamaría International Airport (San José - SJO) ga-enyekwa ọrụ nnwale antigen.
Mwepu na-aga n'ihu nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19, yana mgbakwunye
ego mkpali na ọkwa CDC na nso nso a na ndị America gbara ọgwụ mgbochi
nwere ike ịga mba ọzọ, na-eme ka ndị America na-alaghachi njem.
TSA ejirila nyocha ihe ruru nde 1.3 + ruo otu ụbọchị kemgbe mbido
nke Eprel 2021, nke bụ ihe karịrị ọkara nke nyocha TSA nwere n'otu oge na 2019.
Ọ bụ ezie na ndenye aha ụlọ dị ugbu a na-agafe akwụkwọ ntinye mba,
ebumnuche njem njem mba ụwa na-agbanwe agbanwe na mbido 2020 ebumnuche njem njem mba ofesi, dị ka MMGY Global's 2021 Portrait nke ọmụmụ mmiri nke ndị njem America. Ọzọkwa, 68% nke ndị America nyochara na ọmụmụ ihe ahụ kesara na ha ga-enwe ike ịme njem mba ụwa ma ọ bụrụ na ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ ụgbọ elu na-enye nyocha COVID-19.
Nkwadebe ọrịa na-efe efe nke Costa Rica, njikwa ihe ịga nke ọma nke COVID-19
nje, mwepụ nke ule PCR na-adịghị mma iji banye na mba ahụ, na ọtụtụ nhọrọ nyocha na hotels, ụlọ ọgwụ ọha na eze na ndị ọzọ, na-eme ka obere mba Central America bụrụ ebe kachasị mma maka ndị America iji dee akwụkwọ ka ha na-alaghachi na njem mba.
Nyocha COVID-19 na ọdụ Daniel Oduber Quiros International (Liberia - LIR) na-efu US $ 65.
Ndị ọrụ njem njem Kenya na-enwe nsogbu nke mkpọchi na ụlọ ọrụ njem
US Treasury guzobere ọfịs ọhụrụ iji duzie mmemme nke Enyemaka na Mmemme Iweghachite
Akụkọ njem Israel
Israel kwupụtara atụmatụ iwughachi njem